ဆုတောင်းချက် Times သတင်းစာ Qibla နှင့်ဟေးဒီး Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အစ္စလာမ့် Apps ကပ » ဆုတောင်းပဌနာ Times သတင်းစာ Qibla နှင့်ဟေးဒီး
ဆုတောင်းပဌနာ Times သတင်းစာ Qibla နှင့်ဟေးဒီး APK ကို
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏နာမ၌, အများစုကနှစျလို့ဖှယျ, အများစုမှာ Merciful.Deeniyat ပညာရေးဆိုင်ရာနှင့်ကုသိုလ်ဖြစ် Trust မှအစ္စလာမ့်ဟာ android ဆုတောင်းချက် Times သတင်းစာများအတွက် app ကို Qibla ဦးတည်ချက်များနှင့်နေ့စဉ်ကုရ်အာန် & ဟေးဒီးကြေညာဖို့ကျေနပ်သည်။ အဆိုပါ application ကိုကမ်ဘာပျေါတှငျမဆိုပေးထားတည်နေရာအားလုံးဆုတောင်းပဌနာသချိန်ပေးသည်။ ဒီ app ကသင်၏လက်ရှိတည်နေရာအဘို့သင့် device ကိုဂျီပီအက်စ်နှင့် / သို့မဟုတ်ကွန်ယက်၏အသုံးပြုမှုကိုမှန်ကန်စေသည်နှင့်အထူးသဖြင့်နေ့ / အချိန်များအတွက်ဆုတောင်းပဌနာကြိမ်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်က app ရဲ့အဓိကအင်္ဂါရပ်များဖြစ်ကြသည်
* ဆုတောင်းချက် Times သတင်းစာ
ဒီ app အသုံးပြုသူရဲ့ထုတ်ကုန်တည်နေရာန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. အင်တာနက် (အော့ဖ်လိုင်း) ကို အသုံးပြု. မရှိဘဲအသုံးပြုသူများသည်လက်ရှိတည်နေရာများအတွက်တိကျ5ဆုတောင်းပဌနာကြိမ်ပေးပါသည်။ ဒီ app လည်းထိုကဲ့သို့သောအမျိုးအစားအဘို့မဆို App ကမဖုံးသောတစ်နှစ်ပတ်လုံး Sehri အဆုံး, Ishraaq, Chaasht နှင့် Iftaar ကြိမ်ဖုံးလွှမ်း။ နေရာတိုင်းမှာသက်ဆိုင်သောမြောက်ပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်းနိုင်ငံများတွင်များအတွက်နေ့အလင်းသိမ်းဆည်းညှိနှိုင်းမှုကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။
* နေ့စဉ်ကုရ်အာန် & Hades
app ကို၏ကွဲပြားအင်္ဂါရပ်တစ်ခုမှာကြောင့်တိုင်းဆုတောင်းပဌနာများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဟေးဒီးပြသသည်။ အဆိုပါဟေးဒီးချက်ချင်းသည်အခြားဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကျော်အဖြစ်ကောင်းစွာ shared နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဟေးဒီး app ကိုအတွင်းအသုံးပြုသူဘာသာစကားရွေးချယ်ရေးအပေါ်အခြေခံပြီးအပေါငျးတို့သရရှိနိုင်ဘာသာစကားများရရှိနိုင်ပါသည်။
* App ကို Widget လေး
ဒီ app အမြန်ဝင်ရောက်ခွင့်များအတွက်အိမ်တွင်း screen ပေါ်မှာနေရာချစကာနိုင်သည့်ဆုတောင်းပဌနာကြိမ်နှင့်ဟေးဒီးများအတွက် App ကိုဝစ်ဂျက်ကိုနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ widget ကလက်ရှိဆုတောင်းပဌနာအချိန်နှုန်းအဖြစ်လှပသောနောက်ခံနှင့်အတူတိုင်းဆုတောင်းပဌနာဘို့အလိုအလြောကျပဌနာသနာမကိုအမှီနှင့်အချိန် update ။ အဆိုပါဟေးဒီးကိုလည်းတိုင်းဆုတောင်းပဌနာနှင့်အတူပြောင်းလဲ
* Qibla Direction အဖွဲ့
ဒီ app အရှေ့၏အခြားလမ်းညွန်များအပြင်၌သငျ Qiblah ဦးတည်ချက်ပြသနိုင်ဖို့သင့်ရဲ့ device ကိုရဲ့သံလိုက်အိမ်မြှောင်၏အသုံးပြုမှုကိုအနောက်စသည်တို့စေသည်
အော့ဖ်လိုင်း 27000 + မြို့ရွာတို့အဘို့ဆုတောင်းချက်ကြိမ်စစ်ဆေး Added Option ကို
* Access ကိုအားလုံးဟေးဒီး
သင်တို့ရှိသမျှသည်ဟေးဒီး screen ပေါ်မှာတခါမှာအားလုံး Ahaadees access လုပ်နိုင်
* Enhanced ဝေမျှမယ်ရာထူးအမည်
သငျသညျယခုပလီကေးရှင်းအတွင်းကနေနှင့်ဘာသာစကားမျိုးစုံအတွက်ပုံရိပ်တစ်ခုအဖြစ် widget ကနေမဆိုဟေးဒီးမျှဝေနိုင်ပါသည်
လုံးတစ်နှစ် * ဆုတောင်းချက်အချိန်ကို
သင်ဤနှစ်စဉ်အချိန်ကိုက်ပြက္ခဒိန်ပေါ်တစ်ခုလုံးကိုတစ်နှစ်ပြုသောပဌနာကို access လုပ်တဲ့အချိန်နိုင်ပါတယ်။ အချိန်ကိုကြောင်းတိကျသောတည်နေရာပေါ်အခြေခံပြီးမည်ဖြစ်ကြောင်း
အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မရရှိနိုင်ပါလျှင်အဆိုပါ app ကိုလည်းလက်ရှိတိုင်းပြည်နှင့်မြို့ပြသမယ်လို့
* ဆုတောင်းချက်က Settings
ဒီ app တွက်ချက်မှုနည်းလမ်းများ, Asr ဥပဒေပညာရှင်နည်းလမ်းမြင့်မားလတ္တီတွက်ချက်မှုနှင့်အချိန် format နဲ့တူသောဆုတောင်းပဌနာကြိမ် setting များကိုအဘို့ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးအရေအတွက်အားထောက်ပံ့
သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်အလိုအလျောက်တွက်ချက်အချိန်တစ် fixed jama'at အချိန်သို့မဟုတ်လက်စွဲစာအုပ်ညှိနှိုင်းမှုသတ်မှတ်နိုင်သည်
ဒီ app ကဆုတောင်းပဌနာအချိန်အခါနှိုးစက်, ဖုန်းမြည်သံသို့မဟုတ်အကြောင်းကြားစာကစားဘို့အထောက်ခံမှု inbuild သိရသည်။ ကို default option ကိုပိတ်ထားသည်။ သငျသညျ settings ကိုမှဤ enable နိုင်ပါတယ်။
အကူအညီအပိုင်း app ကိုအတွင်းအမျိုးမျိုးသောအပိုင်းသို့မဟုတ်ဖန်သားပြင်အကြောင်းအသေးစိတ်ပေးပါသည်။
ဒီ app လက်ရှိအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်, အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်, ဒူ, အာရ, ဟိန်နှင့်ဂူဂြာရဘာသာစကားများထောက်ခံပါတယ်။ ကျနော်တို့မကြာခင်လျ, ဘင်္ဂါလီများနှင့်အခြားဘာသာစကားများထောက်ပံ့မည်ဖြစ်သည်။
Oreo များအတွက် Added ပံ့ပိုးမှု
ဆုတောင်းပဌနာ Times သတင်းစာ Qibla နှင့်ဟေးဒီး
18.61 ကို MB
iPray: ဆုတောင်းချက် ...